တစ်ယောက်ယောက်ကိုဘယ်လိုခြေရာခံနိုင်မလဲ & #039; s iPhone (100% အလုပ်လုပ်!)
နေအိမ် Phone Tracker တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ iPhone ကိုခြေရာခံရန်
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ iPhone ကိုခြေရာခံရန်
မတ် 20, 2020
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးဆဲလ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော iPhone ကို tracker တစ်ခု log in လုပ်ချင်ပါသလား။ လူတွေဟာသူတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများထံမှအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမည်သို့ထုတ်ယူရမည်ကိုသိလိုကြပေမည်။
iPhone ကိုဘယ်လိုခြေရာခံရမလဲဆိုတာသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့သံသယဖြစ်ဖွယ်အပြုအမူကိုသတိပြုမိတဲ့မိတ်ဖက်တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ ကလေးများကိုကြီးကြပ်ချင်သောမိဘများပင်လျှင်သူတို့၏စက်ကိရိယာများကိုစစ်ဆေးချင်ကြသည်။
target iPhone Minspy နှင့်ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သောဖုန်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု application နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်အရာအားလုံးကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီအပလီကေးရှင်းကသူတို့ဖောက်သည်တွေကိုတစ်ယောက်ယောက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ခြေရာခံနိုင်အောင်ကူညီပေးတယ်။
အပိုင်း ၁။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ iPhone ကိုသူတို့မသိဘဲခြေရာခံရန်
၁.၁၅၅T ကိုအဘယ်ကြောင့်သုံးသင့်သနည်း။ ဒီဟာကစိတ်ချရလား။
၁.၃၅၅T သည် ၄ င်း၏အသုံးပြုသူများအားအတိအကျဘာပေးသနည်း။
၁.၃ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ iPhone ကိုလျှို့ဝှက်စွာဘယ်လိုခြေရာခံနိုင်မလဲ။
အပိုင်း ၂: တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့တည်နေရာကို iPhone မှာကြည့်ရှုခြင်း
၂.၁ ၂ Spyic ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ သူလုပ်နိုင်တာကအဲဒီ့ထဲကစွမ်းအားအရှိဆုံးသူလျှို Apps တစ်ခု
အပိုင်း ၃: iPhone ကိုအခမဲ့ခြေရာခံရန်
၃.၁ iPhone တည်နေရာကိုအလွယ်တကူရှာဖွေရန် iCloud.com ဖြေရှင်းချက်များကိုအသုံးပြုခြင်း
၃.၂ လျှောက်လွှာမရှိပဲ iPhone ကိုခြေရာခံရန်
တစ်စုံတစ် ဦး ၏ iPhone တွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများသည်သုံးစွဲသူများအားခြေရာခံရန်အတွက်အင်္ဂါရပ်များစွာပေးသော်လည်းအများစုမှာအတော်လေးစျေးကြီးကြသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်သုံးစွဲသူများကိုဆွဲဆောင်ရန်တရားမ ၀ င်နည်းလမ်းများစွာကိုစီမံခန့်ခွဲသည်။
ဤအချက်သည်အသုံးပြုသူများအတွက်မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်စေသည် - အမှန်တကယ် iPhone ကိုမည်သို့ခြေရာခံနိုင်မည်နည်း။
Minspy: လူသိများသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ဖုန်းကိုခြေရာခံခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့တွင်အနည်းငယ်မျှသာပေးသည်၊ iPhone သည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ iPhone ကိုတွေ့တိုင်းမင်းက Minspy ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသတိရပါ။
Minspy မှတဆင့် iPhone တည်နေရာကိုမည်သို့ခြေရာခံမည်နည်း။ ဝေးလံသောနေရာတစ်ခုကို Minspy မှတစ်ဆင့်သွားခြင်းသည်စိတ်ပူစရာမရှိပါ။ Minspy သည် iOS ကိုခြေရာခံနိုင်သည့်ထူးခြားသော platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အချက်ပြမှုများကိုစိုးရိမ်စရာဖြစ်စေသောခက်ခဲသောမြေအနေအထားတွင်ပင်အလုပ်လုပ်သည်။
Minspy: cloud-based iOS solution သည်လက်လှမ်းမမီသောပစ်မှတ်ထုတ်ကုန်များ၏အချက်အလက်အားလုံးကိုတူညီစွာခြေရာခံနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၎င်းတည်နေရာသည် iPhone တည်နေရာ၊ Browser သမိုင်း၊ ချက်တင်ရာဇဝင်နှင့်အခြားအရာများစသည်တို့အတွက်သုံးစွဲသူများအတွက်လွယ်ကူသောအကူအညီများပေးသည်။
Minspy သည်ဖောက်သည်များအား iPhone တွင်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးခြေရာခံစနစ်ကိုပေးသည်။
ပုံမှန်အက်ပ်များမွမ်းမံမှုများနှင့်အတူ, Minspy သည်အသုံးပြုသူများကိုအချိန်တိုင်းစိတ်ချရသော iPhone ခြေရာခံခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုသူများကိုတွေ့ကြုံခံစားစေသည်။ ၎င်းသည် Minspy ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်း၏သန်းချီသောသုံးစွဲသူများက၎င်းကိုareaရိယာတိုင်းတွင်မှီခိုသောကြောင့်၎င်းကိုပြောကြသည်။
ဖုန်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုအင်္ဂါရပ်အားဖြင့် Minspy သည်လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အသုံးပြုရလွယ်ကူသော application ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ Minspy နှင့် ပတ်သက်၍ အကြီးမားဆုံးသောအရာမှာ၎င်းသည်ကိုယ်ပျောက်နည်းပညာဟုခေါ်သည့်အရာအား သုံး၍ အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ထိုသူအားမသိဘဲတစ်ယောက်ယောက်ကိုပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
အခုဒီ stealth နည်းပညာကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။ ကောင်းပြီ၊ iOS ထုတ်ကုန်များတွင် Minspy ဖြေရှင်းချက်မှာတပ်ဆင်စရာဘာမှမရှိပါ။ ၎င်းသည်လုံးဝ cloud-based ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆိုပစ်မှတ်စက်ကိုသင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်ရှုရန်မလိုအပ်ပါ။
သင်လိုအပ်သမျှသည်သင်အကြိုက်ဆုံး browser ဖြစ်သည်။ တစ်ခုရွေးပါ: Safari, Chrome, ဒါမှမဟုတ် Opera ။ ပစ်မှတ်ကိရိယာပေါ်တွင်ဘာမှ install လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သိုလှောင်မှုကိုမသိမ်းဆည်းနိုင်ပါ။ iPhone ကိုနှေးကွေးခြင်းမရှိဘဲချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
၎င်းသည် Spy apps နှင့်အသုံးများသောပြproblemsနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ပစ်မှတ်ထားသောစက်ပေါ်တွင်သိုလှောင်ပမာဏအတော်အတန်ရှိပြီးဖုန်းကိုနှေးစေသည်။ ပစ်မှတ်အသုံးပြုသူသည်ဤသံသယဖြစ်ဖွယ်အပြုအမူကိုမြင်နိုင်ပြီး၎င်းသည်ခြေရာခံနေကြောင်းသိနိုင်သည်။
ထိုနည်းတူစွာ၊ Minspy နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည် target device ၏ဘက်ထရီကိုလည်းမဖြုန်းတီးပါ။ တနည်းကား၊ spy app အများစုသည် target device ၏ဘက်ထရီကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြတ်ထုတ်လိမ့်မည်။ ဤအရာအားလုံးသည်စဉ်းစားစရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှတဆင့် iPhone ကိုစူးစမ်းလေ့လာစေသည်။
အသုံးပြုသူလိုက်ဖက်ညီမှုနှင့်အတူ Minspy သည်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များကို အသုံးပြု၍ သုံးစွဲသူများသည်ပစ်မှတ်များကိုအလွယ်တကူခြေရာခံနိုင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည် ထို့ကြောင့် Minspy အသစ်ပြောင်းလဲမှုကဘာကိုကမ်းလှမ်းမည်နည်း။ အသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုစီသည်အော်ပရေတာများအတွက်လွယ်ကူစွာရှာဖွေရန်အတွက်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအချက်များသော့ကိုဖွင့်သောအခါမည်သူသိသနည်း။
ဒါဆို Minspy ကနေတစ်ဆင့်အခြား iPhone ကိုဘယ်လိုခြေရာခံနိုင်မလဲ။ လက်ရှိ update မှတစ်ဆင့် Minspy သည်ထူးခြားသောလက္ခဏာအချို့ကိုပေးသည်။
၎င်း app သည် Minspy စာရင်း၏ထိပ်တန်း ဦး စားပေးမှုများအနက်မှတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းသည်ပစ်မှတ်ထား iPhone သည်အဓိကထုတ်ကုန်များနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုအပြည့်အဝနားလည်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် Minspy ကသင့်ကို Timestamps အပြင်ပစ်မှတ်ထားတဲ့စက်တွေလည်ပတ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည်။
အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာ Geo-Fencing သည်သတ်မှတ်ထားသောဖုန်း၏ပထဝီအနေအထားကိုသတ်မှတ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ပစ်မှတ်သည်တည်နေရာနယ်နိမိတ်ကိုဖြတ်ကျော်သည်ဖြစ်စေသတိပေးခြင်းဖြင့်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီအင်္ဂါရပ်နဲ့အတူအသုံးပြုသူများသည် Facebook, Instagram နှင့်အခြားများစွာသောပစ်မှတ်ထားသည့်လူမှုမီဒီယာအကောင့်များသို့သူလျှိုဝင်ရောက်ခွင့်ရလိမ့်မည်။
Minspy တွင်ဖော်ပြထားသောဤအင်္ဂါရပ်သည်သူလျှိုများသည်လူမှုရေးစာမျက်နှာများ၊ chat အသေးစိတ်များနှင့်အခြားအရာများသို့လည်းသွားရောက်ခဲ့သည်။
ဤ Minspy feature သည် browser များဖြစ်သောဂူဂဲလ်ခရုမ်း၊ မီးလျှံမြေခွေးနှင့်အခြားအရာများရှိပစ်မှတ်များ၏သမိုင်းကိုအကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။
Browser Monitoring History လုပ်ဆောင်ချက်သည်အချို့သောတရားမဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပစ်မှတ်ထားသောအသုံးပြုသူများအတွက်သူတို့တိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိစေရန်ကန့်သတ်ချက်များပါဝင်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ Minspy တွင်ထိုစွမ်းဆောင်ချက်များပါ ၀ င်သည်။ ပစ်မှတ်စက်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူများကိုခြေရာခံအသုံးပြုသူများကိုတားမြစ်ရန်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပေးသည်။
ဒါက IOS ကို Minspy ဖြေရှင်းချက် သုံးစွဲသူများအတွက် iPhone ထုတ်ကုန်များကိုခြေရာခံရန်ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း 'jailbreak' ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်အထက်ပါသီအိုရီနှင့်ဆက်စပ်လေ့ရှိသည်။
Minspy သည်ကျွန်ုပ်၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာနည်းဖြင့်သင်လိုချင်သည့် iPhone ကိုသာခြေရာခံသောကြောင့် iOS ၏ပစ်မှတ်ကို jailbreak မလုပ်ပါ။
၎င်းသည်ပစ်မှတ်၏တည်နေရာကိုခြေရာခံရန်တာ ၀ န်ရှိသောနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်အတူလာသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ခြေရာခံခံနေရသောအသုံးပြုသူသည်ဤနည်းပညာကြောင့်ဖြစ်စဉ်များအားလုံးကိုသတိမပြုမိပါ။ ၎င်းသည် device ပေါ်တွင်ဘာမှထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ cloud-based ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။
Minspy သည်ပင်မသုံးစွဲသူသည်ပစ်မှတ်စက်ကိုမထိနိုင်သော်လည်းခြေရာခံချင်သောအခြေအနေမျိုးတွင်ပင်ကူညီသည်။ ၎င်းသည် Minspy အားတူညီသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး third-party application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Minspy ကို အသုံးပြု၍ iOS ကိုခြေရာခံခြင်းသည် clapping ကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။ သို့သော်သင်အောက်ပါအဆင့်များကိုဂရုတစိုက်လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ ဤအရာများသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
အဆင့် 1: Minspy အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ။ အသုံးပြုသူများသည် Minspy တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအရင်ကြည့်ရှုရမည်။ ထိုတွင်သူတို့သည်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ဖြစ်သောအရေးကြီးသောအထောက်အထားနှစ်မျိုးကိုသာပေးပြီးသူတို့၏အခမဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
ထို့နောက်၊ အသုံးပြုသူများသည်ဤလိုအပ်ချက်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Minspy တွင်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ပုံစံများကိုပြီးမြောက်နိုင်သည်။
အဆင့် ၂: ကျေးဇူးပြု၍ သတ်မှတ်ထားသော iPhone Credentials ကိုဖော်ပြပါ။
အတော်လေးအဆင်ပြေစွာမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်သုံးစွဲသူများသည် iCloud account tracker ID နှင့်အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်အကြောင်းအသေးစိတ်အနည်းငယ်သာဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။
အဆင့် ၃: target iPhone ကိုသူတို့မသိဘဲခြေရာခံပါ။ သင်ဝင်ရောက်ရန်ပစ်မှတ်ထားသော iCloud အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြပြီးသည်နှင့်အသုံးပြုသူသည်ခက်ခဲသောခြေရာခံမှုကိုတွေ့ကြုံရမည်။ iOS အက်ပလီကေးရှင်းသည်အချက်အလက်များကိုစည်းညှိလိမ့်မည်။ အချက်အလက်မည်မျှပါဝင်သည်ပေါ်တွင် မူတည်၍ ဤဖြစ်စဉ်သည်ခဏကြာနိုင်သည်။
သင်၏ remote device ရှိ Control Panel သို့သွားပါ။ သင်၏အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ လော့ဂ်အင်လုပ်နိုင်သည်။ Dashboard အပိုင်းသို့ဆက်သွားပါ။ iPhone ကိုလျှို့ဝှက်စောင့်ကြည့်ပြီးပြီ။
သင့်ကိုအထူးအကြံပြုလိုပါတယ် Minspy ကိုသရုပ်ပြပါ ဒီ app က real-time ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကြည့်ဖို့။ ဒီဟာကိုမထည့်သွင်းဘဲ app နှင့်သင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်သည်ဤ app ၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
24 ×7လမ်းကြောင်း: Minspy သည်ပစ်မှတ်စက်၏အချိန်နှင့်တပြေးညီတည်နေရာကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ Minspy သည်အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးခြေရာခံသည်။
ကြွယ်ဝသော interface: ထူးခြားသောလက္ခဏာများနှင့်အတူ Minspy သည်သင့်ကိုအခြားရှုထောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးမည်သူမဆို၏စက်ပစ္စည်းကိုခြေရာခံနိုင်ပြီးပစ်မှတ်၏လူမှုရေးအကောင့်များကိုလည်းစူးစမ်းနိုင်သည်။
Jailbreak မပါပဲ Minspy သည်လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုရန်ရှုပ်ထွေးသောနည်းပညာဆိုင်ရာအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒီ app ဟာ device ကို jailbreak ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိသေးတဲ့အပြင်အဆင့်မြင့်တဲ့စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုကိုအသုံးပြုချင်တဲ့သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အက်ပလီကေးရှင်းဒေါင်းလုပ်မရှိပါ Minspy သည်မည်သည့် application မှ download ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ Minspy dashboard မှတဆင့် iPhone ကိုအလွယ်တကူခြေရာခံနိုင်သည်။
အဆင်ပြေသောစျေးနှုန်း: Minspy မှပေးသောစျေးနှုန်းများသည်အလွန်စျေးသက်သာသော၊ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာမှတ်ပုံတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Minspy ပရီမီယံအစီအစဉ်ကိုအလွယ်တကူရယူနိုင်ပါတယ်။
Package အမျိုးမျိုးကိုသူတို့လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီထည့်သွင်းလိုသူများအတွက်ရရှိနိုင်သည်။ ဒါကြောင့် iPhone နဲ့ dual iPhone နှစ်ခုလုံးကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: Application မပါပဲ iPhone ကိုခြေရာခံရန်
Spyic သည် iPhone ခြေရာခံရာနေရာတွင် ဦး ဆောင်နေသည်။ Minspy အပြင် သူလျှို သူသည်သင်လိုချင်သောသူကိုရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်ခြေရာခံရန်အသုံးပြုသောရှေ့ဆောင် application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Spyic ဆိုသည်မှာခေါ်ဆိုမှုများ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများပါ ၀ င်သည့်ပစ်မှတ်ထားသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့် iPhone tracking application ဖြစ်သည်။
Spyic သည် iPhone အတွက် cloud-based ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းကိုသူလျှိုလုပ်နိုင်ရန်ပစ်မှတ်ထားသည့်စက်တွင်မည်သည့်အရာကိုတပ်ဆင်စရာမလိုတော့ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘရောင်ဇာကိုသာအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
iPhone မသိအောင်မသိအောင်ဘယ်လိုခြေရာခံနိုင်မလဲ။ အဖြေ Spyic ၌တည်ရှိ၏။ Minspy ကဲ့သို့သောသူလျှိုလုပ်ငန်းသည်ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုလုံး၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်အိုင်ဖုန်းများကိုအဝေးမှကြည့်ရှုနိုင်ရန်ကူညီသည်။
အိုင်ဖုန်းမှာ iCloud Backup feature လို့ခေါ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ feature တစ်ခုပါရှိပါတယ်။ ၎င်းမှာ cloud server များမှာပုံမှန် backup အချို့ပါရှိပါတယ်။ ယခု Spyic သည်ဤအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်နှင့်သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအခြားအရန်ကူးတစ်ခုမှထုတ်ယူရန်တာဝန်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့်၎င်းသည် target iPhone device ၏ iCloud အထောက်အထားများနှင့်သာအလုပ်လုပ်သည်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည် သူမမသိဘဲကျွန်ုပ်၏သား၏ iPhone ကိုခြေရာခံရန်
အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏စိတ်ထဲတွင်မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာနိုင်သည် - "iPhone ကိုမည်သို့အခမဲ့ခြေရာခံနိုင်မည်နည်း" ။ iPhone device တစ်ခုကိုအောက်ပါအတိုင်းအလွယ်တကူရယူနိုင်သည့်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။
convenရိယာနှင့်အလွန်ဝေးသော iPhone အသုံးပြုသူများကိုလွယ်ကူစွာခြေရာခံရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသေးသည်။ ဒီဖြေရှင်းချက်အတွက် iCloud.com ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစစ်ဆေးပြီးကြောင်းအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။
ဒီအခမဲ့အင်္ဂါရပ်ကို iPhone သုံးစွဲသူများအားလုံးရရှိနိုင်ရန်မိမိတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများအားခြေရာခံရန်အခွင့်အလမ်းကိုရယူလိုသူများအတွက်ရရှိနိုင်သည်။ လမ်းညွှန်ချက်အချို့အတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုအလွယ်တကူလိုက်နာနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏တည်နေရာကိုအလျင်အမြန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
iPhone ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အလွယ်ဆုံးနည်းတစ်ခုကတော့ iCloud account တစ်ခုသာလိုအပ်တယ်။ အသုံးပြုသူများသည်လွယ်ကူသောခြေရာခံရန်ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုချဉ်းကပ်ရန်လိုအပ်သည်။
သင့် iPhone ပေါ်ရှိ Settings option ကိုဖွင့်ပြီး "Apple ID" ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်၏ Apple ID မှ“ iCloud Settings” ကိုရွေးပြီး“ Find my phone” အခြားရွေးချယ်စရာကိုဖွင့်ပါ။
Apple ID ကိုစစ်ဆေးပြီးအတည်ပြုပေးသည့် iCloud အသုံးပြုသူအမည်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်များကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပါ။
iCloud backup မှတဆင့် iPhone ကိုအလွယ်တကူရှာနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူသည် iCloud ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပြီးနောက် iCloud အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရမည်။
သူတို့အသုံးပြုသူများသည် site ပေါ်တွင်ပေးထားသော“ Find my phone” ရွေးစရာကိုကျော်။ အပေါ်ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက်အသုံးပြုသူသည်“ all devices” option ကိုသွားပြီးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်အတွက်တိကျသောကိရိယာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမည်။
မလွဲစေနဲ့: iPhone ပေါ်တစ်စုံတစ် ဦး ၏တည်နေရာကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
ကောင်းပြီ၊ ယခုတွင်သင်သည်ဤမေးခွန်း၏အဖြေကိုရကောင်းရနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတိုးတက်မှုများနှင့်အတူ Minspy သည်စက်ကိရိယာများကိုအဝေးမှခြေရာခံရန်အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များကိုပေးသည်။ ဒီပရိုဂရမ်သည်အင်္ဂါရပ်များပိုမိုကမ်းလှမ်းရန်သူ့ဟာသူတိုးတက်အောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်။
ဤဆောင်းပါးကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိစ္စအတွက် iOS ထုတ်ကုန်များကိုခြေရာခံရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကိုဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မည်။ အမှန်မှာ၊ Minspy သို့မဟုတ် Spyic ၏အကူအညီဖြင့်မိမိတို့ချစ်ရသူများအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုပြသူများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူလာလိမ့်မည်။
ဆဲလ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဘယ်လိုခြေရာကောက်နိုင်မလဲ - အဓိပ္ပါယ်ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်
မိုဘိုင်း GPS တည်နေရာ tracker အလွန်အသုံးဝင်သည်။ သူတို့ကမင်းကိုချစ်မြတ်နိုးရသူတွေပေါ်မှာ tab တွေထားနိုင်အောင်ကူညီပေးပြီးသူတို့ရဲ့လုံခြုံမှုကိုသေချာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ သူတို့ ... ဆက်ဖတ်ရန် ...
ဆဲလ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဘယ်လိုခြေရာကောက်နိုင်မလဲ - အဓိပ္ပါယ်ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန် →
တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဖုန်းကိုခြေရာခံခြင်းသည်ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီညွတ်ဟုအများအားဖြင့်ရှုမြင်ကြသော်လည်းလူတစ် ဦး စီအနေနှင့်၎င်းသည်လူများအတွက်ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန် ...
iPhone ပေါ်ရှိတစ်ယောက်ယောက်၏တည်နေရာကိုခြေရာခံရန် →
ယနေ့ခေတ်နှင့်ယခုခေတ်၌လူများ၏ privacy ကိုလေးစားရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ လူမှုမီဒီယာ၊ အင်တာနက်နှင့် ... ဆက်ဖတ်ရန် ...
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ iPhone ကိုခြေရာခံရန် →
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးဆဲလ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော iPhone ကို tracker တစ်ခု log in လုပ်ချင်ပါသလား။ လူတွေဟာဘယ်လိုထုတ်ယူရမယ်ဆိုတာသိချင်နေနိုင်တယ်။ ဆက်ဖတ်ရန် ...
စကားပြောနေစဉ်အတွင်းသင်၏ရည်းစားဘေးမှသံသယဖြစ်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများကိုသင်သတိပြုမိပါသလား။ သူကမင်းကိုလိမ်နေလိမ့်မယ်။ ဆက်ဖတ်ရန် ...
10 ဖုန်းနံပါတ်အားဖြင့်မိုဘိုင်းတည်နေရာ Tracker →
အခမဲ့ဆဲလ်ဖုန်း tracker ကိုနံပါတ်နဲ့ရှာဖွေနေပါသလား။ ဆဲလ်ဖုန်းနံပါတ် tracker အက်ပလီကေးရှင်းများစွာကိုယနေ့ရရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ဤဆက်ဆက်မဆိုလိုပါ ... ဆက်ဖတ်ရန် ...
10 အကောင်းဆုံးဆဲလ်ဖုန်းနံပါတ် Trackers →
သင်ဆဲလ်ဖုန်းနံပါတ်များကိုခြေရာခံရန်နည်းလမ်းရှာနေပါသလား။ အဲဒီလိုဆိုရင်၊ မင်းအတွက်သင့်တော်တဲ့နေရာရှာတွေ့ပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ... ရှိပါတယ် ဆက်ဖတ်ရန် ...
ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် iPhone ကိုခြေရာခံရန် →
iPhone ဖုန်းနံပါတ်အားဖြင့်မည်သို့ခြေရာခံရန်သင်သိလိုပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ မင်းကနံပါတ်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ iPhone tracker ဖိုင်ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင် ... ဆက်ဖတ်ရန် ...
ဆဲလ်ဖုန်းကိုခြေရာခံခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်သင်သည်စတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်အက်ပ်စတိုးတွင်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဆက်ဖတ်ရန် ...
ဆဲလ်ဖုန်းတည်နေရာများကိုအွန်လိုင်းမှအခမဲ့ခြေရာခံရန်အကောင်းဆုံးဆယ်လူလာ GPS လမ်းကြောင်းများ →
သင်ဆဲလ်ဖုန်းတည်နေရာကိုခြေရာခံရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာနေပါသလား။ အိုကေ၊ ငါမင်းကိုရိုးရိုးသားသားပြောမယ်၊ အင်တာနက်ကပြည့်နေတယ်။ သို့သော်သင် ... ဆက်ဖတ်ရန် ...
ဤနေရာတွင်ရှိခြင်းသည်သင်မကြာသေးမီကသင်၏ဇနီး၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယရှိသည်ဟုပြသည်။ ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ၊ မင်းဟာမင်းရဲ့ခံစားချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဆက်ဖတ်ရန် ...
ဆဲလ်ဖုန်းတွေကဆက်ဆံရေးကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပေမယ့်လည်းအလွဲသုံးစားပြုခြင်းခံရတာကြောင့်သုံးစွဲသူများကသူတို့တည်နေရာကိုအလွယ်တကူလိမ်နိုင်သည်။ ဤသည်ဆက်ဆံရေးကိုချိုးဖျက်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည် ... ဆက်ဖတ်ရန် ...
Snapchat Tracker: တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ Snapchat ကိုခြေရာခံရန် →
လူတိုင်းသည်သင်၏ဆယ်ကျော်သက်အပါအဝင် Snapchat ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် အကယ်၍ သင့်ကလေးသည် အကယ်၍ သင်သည်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းခံရနိုင်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန် ...
Application မပါပဲ iPhone ကိုခြေရာခံရန် →
တန်ဖိုးကြီးလူတန်းစားအိုင်ဖုန်းသည်ယနေ့ထိလူကြိုက်အများဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စတိဗ်ဂျော့၏ဤမှော်အတတ်ကိုလူတို့ပြသခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ဆက်ဖတ်ရန် ...
သူမမသိဘဲကျွန်ုပ်၏သား၏ iPhone ကိုခြေရာခံရန် →
သင့်သား၏အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်သူမသိဘဲ iPhone ကိုခြေရာခံရန်အဖြေတစ်ခုရှာနေသလား။ ဆက်ဖတ်ပါ၊ ဆက်ဖတ်ရန် ...
ဒီနေ့ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုကြီးကြပ်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းလာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပြောရရင်သင်ဟာရည်းစားကိုလက်ခံနေတဲ့သင့်ရည်းစားကိုကြည့်ချင်နေတယ်… ဆက်ဖတ်ရန် ...
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်ခြင်းသည်ခက်ခဲသည်။ ရွယ်တူချင်းဖိအား၊ အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ လေ့လာခြင်း၊ ကြီးပြင်းခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ရမည့်အရာများစွာရှိသည်။ ဆက်ဖတ်ရန် ...
သင်သည်မိဘတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ သင်၏ဘ ၀ ၌သင့်ကလေးများထက် ပို၍ အရေးကြီးသောအရာများမရှိပါ။ သဘာဝကျကျဘယ်သူမဆို ... ဆက်ဖတ်ရန် ...